श्रीमतीका कारण श्रीमानले छोडे संसार – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/श्रीमतीका कारण श्रीमानले छोडे संसार
धरान । श्रीमतीले धोका दिएपछि देहत्याग गरेका भनिएका प्रहरी हवल्दार ओमप्रकाश खतिवडाको श्रीमती र उनको प्रेमी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश शंकर राईका अंगरक्षक प्रहरी हवल्दा खतिवडाले देहत्याग गरेका थिए । प्रहरीले खतिवडाको श्रीमती दीक्षा खतिवडा र उनका प्रेमी भनिएका विशाल तामाङ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । परिवारका सदस्यले उनको निधनमा श्रीमतीकै कारण देहत्याग गरेको आरोप लगाएका थिए । प्रहरीले दुवैजनालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानवाट उनीहरु दोषी देखिएपछि मुद्दा दायर गरेको हो ।
हबल्दार खतिवडाले देहत्याग गर्नुको कारण श्रीमती दीक्षा र विशालबीचको नराम्रो रहेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलासा भएको छ। खतिवडाको श्रीमती दिक्षाको उर्लावारी–९ का विशाल संग दुईवर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको हो । श्रीमतीको नराम्रो सम्बन्ध थाहा पाएका प्रहरी खतिवडाले त्यसैको दुख सहन नसकेर यस्तो गरेको देखिएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाले बताएका छन् । उनीहरु बिरुद्ध देहत्याग गर्न बा’ध्य पारिएको सम्बन्धि मु द्दा दर्ता गरेर कारवाही अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हवल्दार खतिवडाले गत असार १६ गते राति जिल्ला अदालत सुनसरीको छतमा देहत्याग गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार, ‘मृतक खतिवडालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्रीमती अरुसँग लागेको शं’का गर्दै आएका थिए । श्रीमती दीक्षा र विशालकै कारण उनी डि प्रेसनमा पुगेका थिए ।’ कल डिटेल अनुसार देहत्याग गरेको समयमा उनले श्रीमतीलाई र विशाललाई फोन गर्दा लामो समय दुबैको मोबाइल व्यस्त भएपछि डि प्रेसन र आ’वेशमा आएर आफैले देहत्याग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । दु’रुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेका विशाल तामाङ खतिवडाकै छिमेकी हुन् ।
देहत्याग गर्नु अघि ओम प्रकाशले दीक्षालाई पनि फोन गरेको र विशाललाई पनि फोन गरेर मेरो जिन्दगी ब’र्बाद पा’रिस श्रीमतीलाई लगर राम्रोसँग पाल भनेका थिए । श्रीमती दिक्षाको तामाङसँग सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि ओमप्रकाशले बारम्बार सम्झाएको पनि अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीसंगको बयानमा पनि दुवै जनाले आफुहरुको प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुबीच शा’रि’रीक स’म्बन्ध पनि रहेको प्रहरी सामु स्वी’कार गरेको प्रहरीले जनाएका छन् ।
प्रहरी हवल्दार ओमप्रकाश खतिवडाको देहत्याग घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । उनले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडीको पाटा खुल्दै जान थालेका छन् । मोरङको उर्लाबारी–९ राजघाटका हवल्दार खतिवडाले देहत्याग गरेका थिए । उनका दाई , दिदी लगायत परिवारका सदस्यले घटनाको कारणवारे अचम्म लाग्दो वयान दिएका छन् । श्रीमानले देहत्याग गरेको घटना सुनाउन जाँदा उनको श्रीमतीले अनौठो कुरा भनेकी थिइन् ।
ओमप्रकाशका दाजुले भने एक्लै कोठामा बसेकी बुहारीलाई कसरी त्यो कुरा सुनाउने भनेर हामी गएका थियौं, मेरो श्रीमती सहित तिन जना गएर उनलाई तिम्रो श्रीमान बिरामी छन् रे भनेर सुनाउँदा श्रीमतीले उल्टै कहाँ बिरामी हुनु म’रिस’क्यो रे त ? भन्दै आ’श्चर्यजनक जवाफ दिएको उनले बताए । ओमप्रकाशले मलाई अर्कै पुरुषको जिम्मा लगाइदिनु भनेका छन् रे तपाईहरु जिम्मा लगाउन आउनुभएको हो ? भनेर समेत प्रश्न गरेको उनले बताए । बुहारीलाई पी’डा परेको होला भनेर बुझ्न जाँदा उल्टै मलाई अर्कै मान्छेलाई जिम्मा लगाउन आएको हो भनेर प्रश्न गरेपछि अचम्ममा परेको बताए ।
ओमप्रकाशको दिदीले पनि श्रीमतीलाई अति माया गरेको भाईले बुहारीवाट घात पाएपछि देहत्याग गरेको बताएकी छन् । एकतर्फी माया गरेको मान्छेले नै घा’त गरेपछि अ’सह्य भएको हुनसक्ने बताइन् । उनले बुहारीकै कारण घटना भएको दावी गरेको बताएका छन् । प्रहरीले बुहारी दीक्षा खतिवडा र उनकी प्रेमी भनिएका विशाल तामाङलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । असार १६ गते आफैले देहत्याग गरेका थिए । ‘मृतक खतिवडालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्रीमती अरुसँग लागेको शंका गर्दै आएका थिए ।